Soomaalilaan: Dad baahi iyo haraad u geeriyooday
Photo | Dad soo barakacay oo quudin saf ugu jira/sawir/keyd
07 September, 2015 SOMALILAND
11 qof ayaa cunto-yari iyo haraad ugu geeriyooday deegaano dhaca galbeedka Soomaalilaan oo abaar ay ka jirto saddexddi bilood ee u dambeysay, sida ay sheegtay Hey’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaalilaan.
Maxamed Muuse Cawaale oo ah guddoomiyaha Hey’ada ayaa sheegay in sagaal ka mid ah dadkaas macluul iyo haraad ugu geeriyoodeen gobolka Selel oo ka mid ah deegaanada abaartu saameynta ugu weyn ku yeelatay. Saddexda qof ee kale ayaa ku geeriyooday tuulooyinka Bali-gubadle iyo Salaxley oo oo ku yaal hawdka koofurta Hargeysa.
Abaarta ayaa saameynta ugu weyn ku yeelatay dadka xoolo-dhaqatada ah iyo beeraleyda gobolada Selel, Awdal iyo Gebiley oo roob wanaagsan helin labadii sanno ee lasoo dhaafay. Bulshadaa waxaa abaarta u nugleysay isbedelka cimiladda, xaaluf ku yimid dhulka, biyo qabatinka dhulka oo yar, iyo hanaankii adkaysiga dadka oo dhintay, sida uu sheegay Maxamed.
Cabdirisaaq Waaberi Rooble, gudoomiyaha gobolka Selel ayaa raadiyoow Ergo u sheegay in dadka xoolo-dhaqatada ah ay ka barakacaan gobolka, iyagoo oo qaarkood xoolahooda daaqsin iyo biyo ku raadinaya, halka qoysas abaarka ku ceyrtoobayna ay magaalooyinka galayaan. “Tiro ma leh xoolaha dhimanaya oo bakhtiga xoolaha meelkasta ayuu daadsan yahay,” ayuu yiri Cabdirisaaq. Wuxuu tusaale usoo qaatay, qoys lahaa saddex boqol oo neef oo ay u hartay sodon neef oo keli ah oo magaalada kusoo barakacay.
Cabdilaahi Maxamed Faarax wuxuu ka mid yahay boqolaal xoolo-dhaqatu ah oo ka barakacay gobolka Salel. Wuxuu u barakacay gobolka Hawd oo daaqsin iyo biyo ay ku tuhmayeen, laakiin xoolo-dhaqatadu isu timid deegaanka ayaa horseeday in daaqsin ku filan xoolaha oo dhan laga helo deegaankaas. Wuxuu Cabdilaahi sheegay in daaqsin yar oo kooban deegaanku leeyahay, laakiin waraha iyo barkadaha biyaha oo dhan ay gureen. “Baligubadle baan joogaa, dhibin biyo ahna kuma haysanno,” ayuu yiri Cabdilaahi oo 80 ka mid ah xoolihiisu abaarta ku dhinteen. Waxaa u haray 150 neef oo keli ah.
Xoolo-dhaqatada oo kali ah ma ahan, laakiin abaartu waxa ay saameysay dadka beeraleyda ah ee gobolka Gebiley oo aan sanadkan beeraha tabcin roob la’aan awgeed. Cabdiraxmaan Quule oo ah gudoomiyaha beeralayda deegaanka Ijaara ayaa Raadiyoow Ergo u sheegay in raashinkii keydka ahaa uu ka go’aday qoysas beeraley dhan 1200 oo qoys oo ku tiirsanaa miraha kasoo go’a gobolka. Wuxuu intaa ku daray in la joogi xilligii la guran jiray tacabka beeraha, laakiin sanadkan aysan mirna u go’in bulshada deegaanka.
Sagal Axmed Rooble/MX/MR